नेटफ्लिक्सको नयाँ सिरिज ‘द मिडनाइट क्लब’ को मुख्य भूमिकामा नेपाली युवकMain Samachar
नेटफ्लिक्सको नयाँ सिरिज ‘द मिडनाइट क्लब’ को मुख्य भूमिकामा नेपाली युवक
२१ माघ २०७७, बुधबार १०:४३ प्रकाशित
काठमाडाैँ । नेटफ्लिक्सले निर्माण गर्न लागेको नयाँ श्रृंखला ‘द मिडनाइट क्लब’ को मुख्य पात्रको रुपमा नेपाली मुलका युवा कलाकार छानिएका छन् । क्रिस्टोफर पाइकको बेस्ट सेलिङ उपन्यास ‘द मिडनाइट क्लव’ मा आधारित सो श्रृंखलाका लागि मुख्य पात्रमा नेपाली मुलका युवा कलाकार सौरियन सापकोटा छानिएका हुन् ।
माइक फ्लानागन र लेह फंगले निर्देशन गर्न लागेका यो सिरिजको मुख्य पात्रमा सौरियन सहित अडिया, इगबी रिग्ने, रुथ कड, अया फुरुकावा, अनारहा शेफर्ड, विलियम क्रिस सम्टरलगायत रहने जनाइएको छ। त्यस्तै जच गिलफोर्ड, म्याट बाइडेल र सामन्था स्लोएन सहायक पात्रको रुपमा देखिनेछन् ।
निर्देशक फ्लानागनले सोमबार ट्विटरमार्फत महत्वपूर्ण कलाकारहरुको घोषणा गरेका थिए। त्यसमा सौरियनको पनि नाम छ। उनका अनुसार हरर विधामा आधारित उक्त सिरिज १० एपिसोडको हुनेछ भने आगामी बसन्त यामदेखि छायांकन शुरु गरिनेछ ।
सन् १९९४ मा प्रकाशित उपन्यासमा दीर्घ रोग लागेका केही टिनएज केटाकेटीहरुको मर्ने चाहनाका वरिपरी घुमेको छ। उनीहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला मर्नेले चिहानबाटै भए पनि बाँचेकाहरुलाई सम्पर्क हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्ने सहमति गरेको विषय यसको मूल कथा हो।
शृंखलाको सुटिङ आगामी मार्च महिनादेखि क्यानाडामा हुने बताइएको छ।
को हुन् सौरियन ?
नेपालमा विराटनगर घर भएका डा. सञ्जीव सापकोटाका छोरा हुन् सौरियन सापकोटा । डा. सञ्जीव सापकोटा स्वीजरल्याण्डस्थि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा कार्यरत रहँदा सौरियन पनि उतै जन्मिएका थिए ।
माध्यमिक तहमा थिएटर विषय अध्ययन गरेका सौरियन हाल न्यूयोर्क स्टेट युनिभर्सिटीमा पर्फर्मिङ आर्ट विषयमा दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत छन् ।
विद्यालयमा हुने विभिन्न प्रतियोगितामा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेका उनले धेरै पटक पुरस्कार पनि जितेका छन्। १९ बर्षीय सौरियनले जर्जियाको गुइनेट काउन्टीमा हुने चलचित्र महोत्सवमा लगातार ४ वर्ष पुरस्कार जितेका थिए ।
सौरियन अभिनयमात्र हैन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफीका साथै निर्देशनमा पनि जानकार छन्। उनले निर्माण गरेका केही सर्ट मूभिहरु युट्युवमा पनि हेर्न सकिन्छ।
नेटफ्लिक्सजस्तो ठूलो ब्यानरमा अनुभवी कलाकारहरुसँग काम गर्न पाउँदा आफूलाई निकै गर्व महसुस भएको उनले बताएका छन् । छोराले यति ठूलो सफलता प्राप्त गरेकोमा उनका परिवार पनि निकै खुशी र गौरवान्वित भएका छन् । सौरियनले भने यसलाई अवसर र चुनौती दुबै रुपमा हेरेका छन् ।